किन बग्छ युवतीको योनीबाट सेतो चिप्लो पानी ? « Sajha Page
प्रकाशित मिति: November 21, 2017
– डा. विष्णु चापागाईं
अधिकांश महिलाहरुको योनीबाट सेतो, पहेंलो, हरियो, रगत मिसिएको आदि इत्यादि प्रकारको चिप्लो पदार्थ बग्ने समस्या हुन्छ ।
यो सामान्य पनि हुनसक्छ वा प्रजनन अङ्गमा कुनै किसिमको संक्रमणको संकेत हुन सक्छ । यो पानी जस्तो पदार्थ सन्तान उत्पादन गर्ने अङ्गहरु ओभरी, फलोपिवन ट्युव, भेजिना तथा क्यरभिक्सबाट पनि हुनसक्छ । सामान्य किसिमबाट बग्ने पदार्थ गन्ध नआउने पातलो हुन्छ । गर्भवति भएको बेलामा बग्ने सेतो पानी सामान्य हुन्छ ।
असामान्य खाले पानी पहेँलो, हरियो वा गन्ध आउने खालको हुन्छ । यसमा कुनै किसिमको हानीकारक जिवाणु वा सूक्ष्मजीव हुन सक्छ । यस मध्ये यौनसम्पर्कबाट सर्ने रोगहरु, भाइरस तथा ब्याक्टेरियल रोगहरु, भिरिङ्गी जस्ता कारणहरु मुख्य हुन्छन् । पाठेघरको मुखमा संक्रमण हुनुका साथै मस्क्युस ग्लान्ड संक्रमण हुँदा धेरै जसो सेतो पानी सहित विभिन्न रङ्गमा देखिन सक्छ । यिनै पनि संक्रमण हुन् सक्छ । योनीमा संक्रमण भएमा योनी धेरै चिलाउने मैलो र गन्हाएको पानी बग्ने हुन्छ । योनी धेरै जसो फंगसबाट संक्रमण हुन्छ । प्रोटोजोन भन्ने परजिवीबाट पनि संक्रमण हुन्छ । यस्ता किसिमका संक्रमणले योनीमा अत्यन्त बेचैनी ल्याउछ ।
सबै किसिमका महिलाहरुमा यो समस्या हुन्छ । सेतो पानी बग्नुलाई सामान्य भाषामा सेतोपानी बग्ने भनेपनि यो योनीबाट बग्नृे हुनाले प्रायः सामान्य रुपमा लिइन्छ । महिला जनेन्द्रीय धेरै संक्रमण हुने सम्भावना पनि हुन्छ । कारण महिलाहरु योनीको भागलाई अत्यन्त होशियार किसिमले ढाकिएको हुन्छ र यहाँ धेरै पसिना पनि आउछ । समयमा सफा हुन पाउदैन र संक्रमण तथा सुनिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । महिलाहरु यस्ता समस्या छिटो भन्दैनन् र समयमा उपचार पनि पाउदैनन् । अझै गन्हाउने समस्या भएमा त झन् अरुको नजिक जान पनि डराउने वा लाज मान्ने गर्दछन् । यस्ता कारणले ल्युक्रोहोइया उपचारमा समेत अप्ठरो हुन्छ ।
महिलाहरुले यो समस्याको लागि चिकित्सकलाई परीक्षण पनि गराउनु पर्दछ भने केही आफैं उपचारमा पनि लाग्नुपर्दछ । फलफूलमा केरा, स्याउ, आप त्यस्तै हरियो सागपात खाने, प्रशस्त पानी पिउने, कागती पानीले योनी वरिपरी सफा गर्ने तर गर्भवति महिलाहरुले आफूखुशी धेरै कुराहरु खानुहुँदैन ।
सेतो पानी बढी भएमा निम्न असरहरु देखिन्छ कमजोरी हुने, अल्छि लाग्नु, सेतो पदार्थ योनी वरीपरि देखिनु, ढाड तथा पेटको तल्लो भागमा दुख्ने, गल्ने, कब्जियत हुने, टाउको दुख्ने, योनी चिलाउने, सुनिने तथा बेचैनी हुने, आँखाको तलपट्टि कालो हुने, च्याउरी पर्ने, अपच हुने, कालो हुने, अपच हुने, भोक नलाग्ने, पेट फुल्ने, नराम्रो गन्ध आउने । – साप्ताहिकबाट
असिनापानीले २० करोड बराबरको केराखेती स्वाहा !
रत्ननगर, चितवन, २४ वैशाख । हावाहुरी र असिनापानीका कारण पूर्वी चितवनको विभिन्न क्षेत्रमा रु २० करोडभन्दा बढीको केराखेती सखाप भएको
काठमाडौँ, २३ वैशाख । साताको पहिलो दिन आज शेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्चेञ्जका अनुसार
सबै यातायात समितिका बैंक खाता राष्ट्र बैंकले रोक्का गर्यो
काठमाडौं, २३ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण यातायात समितिका बैंक खाता रोक्का गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ। अर्थ
सबैभन्दा बढी सुन भएका विश्वका टप टेन देशहरुको बारेमा जानिराखौं
एजेन्सी । सुन लोककै वहुमुल्य चिज हो । विश्वका मुद्राहरुको मूल्य सुनको मूल्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने भएको हुन्छ । कुनैपनि
दश वर्षमा तीन गुणाले वृद्धि भयो नेपालमा सैन्य खर्च
काठमाडौ, २३ बैशाख । वार्षिक सैन्य खर्चको हिसाबले नेपाल दक्षिण एशियामा पाचाैँ स्थानमा परेको छ। द्वन्द, हातहतियार तथा निशस्त्रीकरण सम्बन्धी
डलरकाे भाउ एक वर्षयताकै उच्च, किन बढ्यो डलरको भाउ ?
काठमाडाै, २३ बैशाख । अमेरिकी डलरकाे भाउ बढेर एक वर्षयताकै उच्च विन्दूमा पुगेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि
अदभुत क्षमताकी बालिका जो नहेरीकनै अक्षर पढ्छिन्,रङ पत्ता लगाउँछिन् (भिडियो)
पोखरामा बन्यो प्लाष्टिकको सडक, खेर गएका प्लाष्टिकबाट यस्तो सडक बन्छ (भिडियो)
प्रहरी र तरुणबिच यसरी भयो भिडन्त,एकाएक आतंकित बन्यो बानेश्वर
छिनभरमै छालाको डरलाग्दा दाग र चाउरीपन हटाउने अचुक घरेलु उपाय जनिराखौं
यी हुन् विदेशमा समेत पुगेर जस्तो सुकै क्यान्सरलार्इ शतप्रतिशत निको पार्ने नेपाली बैध
श्रीमती हुँदा हुँदै आफ्नै दुइ छोरीहरु वलात्कार गर्ने राक्षस बाबु प्रहरी फन्दामा [भिडियो हेर्नुहोस ]
लाइभ दोहोरीमा पहिलोपटक हारिन दोहोरीकी रानी प्रिती आले (भिडियो सहित )
श्रीमतीलाइ कुटेर आँखा फोडीदिने श्रीमानलाइ केटी पक्षका दाइ र ससुरा मिलेर बीच बाटो मै समख सिकाए (भिडियोसहित)